Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » Ubuncinci abantu abangama-27 basweleke kwintlekele yephenyane ye-English Channel
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Ukubambisa • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Abanye abafuduki abangekho mthethweni balushiye unxweme olusemantla eFransi kunesiqhelo ukuze bathabathe ithuba leemeko zolwandle ezolileyo ngoLwesithathu, nangona amanzi ayebanda kakhulu.
Inani labafuduki abangekho mthethweni abasebenzisa izikhephe ezincinci okanye iinqanawa zokuwela i-English Channel liye lakhula ngokukhawuleza kulo nyaka, nangona imingcipheko ephezulu yeentlekele zaselwandle ezinokubakho.
Ngokwamapolisa aseFransi kunye namagosa asekuhlaleni, ubuncinane abantu abangama-27 basweleke kwintlekele yamva nje, ngelixa bezama ukuwela i-English Channel ukusuka eFransi ukuya eNgilani xa isikhephe sabo esincinci satshona kunxweme olusemantla Calais, eFransi.
USodolophu we Calais, uNatacha Bouchart, uthe namhlanje inani lokufa kwabantu abatshonayo limi kuma-27, kwimizuzu emva kokuba omnye usodolophu ebeke inani lama-24.
Amapolisa aseFransi athi ubuncinci abantu abangama-27 babhubhile.
UFranck Dhersin, usekela-ntloko yezothutho zengingqi kunye nosodolophu waseTeteghem kunxweme olusemantla eFransi uthe inani lokufa lifikelele kwi-31 kwaye abantu ababini abasekho.
The UNUmbutho waMazwe ngaMazwe wokuFuduka ubize esi siganeko njengeyona lahleko inkulu yobomi kwi-English Channel ukusukela oko baqala ukuqokelela idatha ngo-2014.
Omnye umlobi wafowunela abezohlangulo emva kokubona iphenyane elingenanto nabantu ababedadayo bengashukumi kufutshane.
Izikhephe ezintathu kunye neehelikopta ezintathu zisetyenzisiwe ukuba zithathe inxaxheba kukhangelo, abasemagunyeni balapha bathi.
Inkulumbuso yaseFransi uJean Castex ubize isikhephe ukuba "yintlekele".
“Iingcinga zam zikubantu abaninzi abalahlekileyo kunye nabonzakeleyo, amaxhoba abarhwebi abasebenzisa kakubi ukubandezeleka kunye nosizi lwabo,” utshilo kuTwitter.
Inkulumbuso yase-UK u-Boris Johnson uthe "wothukile kwaye wothukile kwaye ulusizi kakhulu ngokuphulukana nobomi".
“Iingcinga novelwano lwam ngamaxhoba kunye neentsapho zabo kwaye kukwinto embi kakhulu abathe babandezeleka ngayo. Kodwa le ntlekele igxininisa indlela ekuyingozi ngayo ukuwela iChannel ngale ndlela,” wongeze watsho.
UJohnson wafunga ukuba urhulumente wakhe "akazukuyishiya into yokudiliza isiphakamiso soshishino lwabarhwebi kunye nemigulukudu," emva kokuba ebechophele intlanganiso yekomiti karhulumente engxamisekileyo malunga nokuwela.
Kwangoko ngolwesiThathu, isebe lezangaphakathi laseFransi lathi iinqanawa zokujikeleza zaseFransi zifumene imizimba emihlanu kunye nabanye abahlanu bengazi nto emanzini emva kokuba umlobi exelele abasemagunyeni.
Esi siganeko siza njengoko kukhula ukungavisisani phakathi kweLondon neParis ngenxa yamanani arekhodiweyo abafudukayo abawela iChannel.
Inani labafuduki abangekho mthethweni abasebenzisa izikhephe ezincinci okanye iinqanawa zokuwela iChannel likhule kakhulu kulo nyaka, nangona kukho ingozi enkulu.
Ngokwamagosa ase-UK, bangaphezulu kwe-25,000 abantu abasele befikile ngoku kulo nyaka, sele bephindwe kathathu inani elirekhodwe ngo-2020.
IBritane ibongoze iFrance ukuba ithathe amanyathelo angqongqo kwabo bazama ukuthatha uhambo.